Hoy RANDRIANASOLO Jacques - Minisitry ny fitsarana " Misy olona akaikin-dRajoelina atao fanadihadiana mombany kolikoly " - Tia tanindrazana 8 mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Lutte contre la corruption à Madagascar Hoy RANDRIANASOLO Jacques – Minisitry ny fitsarana » Misy olona akaikin-dRajoelina atao...
Hoy RANDRIANASOLO Jacques – Minisitry ny fitsarana » Misy olona akaikin-dRajoelina atao fanadihadiana mombany kolikoly » – Tia tanindrazana 8 mars 2019
Nisy ny mpanao politika, mpitondra teo aloha, mpandraharaha efa nohadihadiana. Eo ireo naiditra am-ponja, misy ny mbola tohizana ny fanadihadiana momba azy. Laharam-pahamehana ho an’ny fitondram-panjakana ny ady amin’ny kolikoly ary tsy an-kifidy henjehana izany io, tsy misy fanavakavahana ihany koa, hoy ny minisitry ny fitsarana Jacques Randrianasolo omaly nandritra ny fanolorana ireo fiara vaovao 4 ho an’ny fandraharahana ny fonja. Nohamafisiny fa misy olona akaiky ny filoha Andry Rajoelina hanaovana fanadihadiana ihany koa amin’izao fotoana noho ny resaka kolikoly. Tsy hanavahana olona na asa na andraikitra izy ity, hoy hatrany ingahy minisitra fa asa tsy maintsy atao satria misy kolikoly avokoa ny sampandraharaham-panjakana rehetra ka tsy maintsy hiadiana izany. Haingana dia haingana raha ny fampidirana am-ponja an’i Mbola Rajaonah, izay sokajiana fa akaiky ny fitondrana teo aloha, samy miandry indray izany ny rehetra hoe hanao ahoana ny momba ireo olona manodidina sy akaiky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, izay efa hatry ny efa no re siosion-dresaka fa tena henjana amin’ny fanangonan-karena tsy mazava, ny fanaovana kolikoly, misy ihany koa aza ny ahiahy amina famotsiam-bola. Nisy ny efa voasava trano sy namoahana didy tsy fahafahana mivoaka an’i Madagasikara tamin’ny fitondrana teo aloha. Mbola resaka tsy mazava hatramin’izao ihany koa ny momba ny fanadihadiana ataon’ny fitsarana Frantsay mombana mpandraharaha mpanefoefo iray akaiky an’i Andry Rajoelina. Ho hita eo ny ho tohiny ary ho hita eo marina izany hoe fitsarana tsy mitanila izany.
Article précédentTsy hitsitsy amin’ny fandikan-dalàna ny fitsarana hoy RANDRIANASOLO Jacques – Ao Raha du 8 mars 2019
Article suivantDans le cadre du projet “Ny Fanjakana ho an’ny Daholobe”, quatre véhicules ont été remis à l’inspection des juridictions pour le renforcement d’une Justice indépendante et impartiale à Madagascar – La gazette de LGI du 8 mars 2019
Madagascar illégitimes attaques du régime Hvm – La gazette de...